Nagu saabsan - Tspringwater Co., Ltd.
Mid ka mid ah Dabaasha
Bikini 2 Gabal Dabaasha
Ragga dharka Swimi
Dharka Dabaasha Gabdhaha
Koofiyad dabbaal iyo Accesorry
Xiro Dharka Ilmaha
Shirkad Soo Bandhig
Tspringwater Co., Ltd. oo ku taal Quanzhu City, Gobolka Fujian, oo ah xirfadle xirfadle ah oo soosaara dharka iyo dhoofiyaha, iyo in ka badan 10 sano. Naqshadeynta, horumarka, soo saarista iyo soo saarista, suuqyada looga baahan yahay adduunka oo idil, sida waddamada EU, USA, Canada, Australia iyo Aasiya Waxaan aqbalnaa OEM custom.some alaabooyin kayd ah oo aan lahayn MOQ.
Waxaan bixinaa dharka dharka sida Dabaasha, Dharka Xeebta, naqshadeynta isku dhafan, Dharka hoose, Dharka Dumarka ee Sexy, Dharka Sportiga ee haweenka, ragga iyo carruurta. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa boorsooyin kala duwan sida Baakad fuulista, Bag qadada, bacda kumbuyuutarka.
Warshaddeenu kaliya uma isticmaasho mashiinada harqaanka casriga ah iyo habab xirfadeed si ay u soo saarto Dharka, laakiin sidoo kale waxay shaqaalaysiisaa shaqaale khibrad leh.Waxay warshaddeena samayn kartaa wax ka badan 2000 kumbuyuutar oo wax soo saar ah maalin uun.Our shirkaddayadu waxay siisaa dharka isboortiga in ka badan 65 dal in ka badan 4,500 tafaariiqleyaal lagu kalsoon yahay. Kaliya ma qabanno adeegga ODM, laakiin sidoo kale adeegga OEM.
Ixtiraamka macaamiisha, Daacadnimada, Kooxda marka hore
Aragtida shirkadda: Abuur alaabada sumcadda ugu caansan adduunka
Falsafadda ganacsiga ee shirkadda: daacadnimada, iskaashiga, guusha-ku-guuleysiga, horumarka!
Xaaladda Shirkadda: Dhiirrigelin, Caafimaad qab, Rajo-qabe, Dulqaad, Wadaag, Midnimo, Mahadnaq.
Himilada shirkadda: U samee qiimo macaamiisha, U xaqiiji riyada shaqaalaha, Barwaaqo u noqda dalka hooyo, oo samee dadaal aan kala go 'lahayn oo farxad u ah naftooda iyo qoysaskooda.
Abuur badeecooyinka ugu caansan isboortiga adduunka
Tspringwater Co., Ltd. oo ku taal Quanzhu City, Gobolka Fujian, oo ah xirfadle xirfadle ah oo soosaara dharka iyo dhoofiyaha, iyo in ka badan 10 sano. Naqshadeynta, horumarka, soo saarista iyo soo saarista, suuqyada ayaa looga baahan yahay adduunka oo idil, sida waddamada EU, USA, Canada, Australia iyo Aasiya. Waxaan aqbalnaa OEM custom.some alaabooyin kayd ah oo aan lahayn MOQ.
Maamulaha iibka waaxda caalamiga ah: Shelly Wang